मध्यराती बालुवाटारमा चर्का चर्की, भुसालको नोटअफ डिसेन्ट
काठमाडौ, २३ फागुन। राष्ट्रपतिको टुंगो लगाउन बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकमा प्रक्रियाका बिषयलाई लिएर नेताहरुबीच चर्का चर्की भएको छ। मंगलबार राती १२ बजे सकिएको बैठकले राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीको नाम टुंगो लगाए पनि बैठक पहिले जस्तो सोहद्र हुन नसकेको एक नेताले बताए।
बैठक साँंझ ४ बजेका लागि तय भएको थियो। नेताहरु साँंझ साँंढे चारबजे सम्ममा भेला भएका थिए। त्यसपछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको जन्मोत्सव मनाइएको थियो। यसो हुँदा सम्म ५ बजेको थियो। त्यसपछि कोहि नेताहरु बालुवाटारमा नै बसे । कोहि कार्यक्रम तर्फ निस्किए। त्यसपछि स्थायी समितिका सदस्यहरुले फेरि जम्मा भएर बालुवाटारमा नै खाना खाएका थिए। त्यसबेला सम्म साँंझको ७ बजेको थियो। त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक शुरु भयो।
राष्ट्रपतिको चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर छलफल शुरु भएको थियो। त्यसपछि पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बैठकाम पडकिए‘ हाम्रो पार्टीमा यो के पारा हो, कुनै कुरामा छलफल छैन, काम गराईमा पारदर्शीता छैन हाटहुट मा नै निर्णय गर्ने’। खनालले बिगत चुनावहरुमा टीकट वितरणमा समेत संस्थागत निर्णय नभएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा खनाल कड्किए ‘आफुलाई लागेको सबै ठीक अरुको कुरा सबै बैठीक’ । खनालको कुरालाई साथ दिए उपमहासचिव घनश्याम भुसालले। जहिलेपनि अन्तिम अवस्थामा आएर, राती बैठक डाकेर अरुलाई कुनै मौका नै नदिएको भन्दै भुसाल कडकिए। भुसालले भनेका थिए‘संसदीय दलको नेता छान्नका लागि कहाँं निर्णय भयो? प्रधानमन्त्री ओली तर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका थिए ‘ म तपाईसंग संसदीय दलको नेतामा भिड्न चाहन्थे, हार्थे जित्थेँ बेग्लै कुरा हो तर मलाई त्यसबाट किन बन्चित गरियो? ’। भुसालले बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञावलीका बारे पनि कुरा उठाए। ‘ आज माधव नेपाललाई महाधिवेशनमा भोट हालेको आधारमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले सडकमा रोएर हिड्नु पर्ने अवस्था बनाउने अनि युवराज ज्ञावलीलाई जिम्मेवारी के दिने भन्ने बिषयमा छलफल नहुने’। बैठकमा त्यति धेरै कडा रुपमा पेश नभएपनि माधव नेपालले आफुलाई महाधिवेशनमा भोट हालेका आधारमा काखा पाखा नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानकर्षण गराएका थिए।
नेताहरुबीच यसरी चर्का चर्की हुँंदा हुदै रातको १२ बजेको थियो। स्थायी समितिका सदस्यहरु राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी कि झलनाथ खनाल भन्ने कित्तामा बाँंडिएका थिए। अध्यक्ष ओलीको प्रवल ईच्छा फेरि पनि भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाउने भएकोले उनी यो अडानबाट पछि हटेनन्। अध्यक्षले यस्तो अडान लिएपछि नेताहरुले राष्ट्रपति जस्तो बिषयलाई विवादमा नपारौ भन्दै उठे। अन्तिममा घनश्याम भुसालले अहिले धेरै राती भयो , मेरो विद्याको नाममा होइन निर्णय प्रक्रियामा बिमत्ति छ मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ भोली आएर लेख्छु भन्दै बाहिरिए।
२०७४ फाल्गुण २३ बुधबार १०:१४:०० मा प्रकाशित